मौसमको पूर्वसूचना चाहिएको छ ? फोन गर्नुस् टोल फ्री नम्बरमा र थाहा पाउनुहोस् मौसमको जानाकारी – osnepal tv
मौसमको पूर्वसूचना चाहिएको छ ? फोन गर्नुस् टोल फ्री नम्बरमा र थाहा पाउनुहोस् मौसमको जानाकारी
वर्षाका बेला कतै हिँडडुल गर्नु छ भने ११५५ टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् । जहाँबाट वर्षा बढी हुने स्थान, बाढी, पहिरो र डुबान जोखिम क्षेत्रको जानकारी सहजै दिइन्छ।
त्यस्तै ‘नेपाल फ्लड अलर्ट’ नामको फेसबुक पेज र ट्विटर पेजमा पुगेर पनि वर्षा र यसले निम्त्याउने जोखिमको अवस्था थाहा पाउन सकिने बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका कर्मचारी सुनिल पोखरेलले बताए।
Previous article दबाबमा सरकार, पूर्व निर्णय फिर्ता
Next article राहप गुम्बाबाट मूर्ति चोरीको आरोपमा पक्राउ परी धरौटीमा छुटेका तीन जना पुनः पक्राउ
दबाबमा सरकार, पूर्व निर्णय फिर्ता
राहप गुम्बाबाट मूर्ति चोरीको आरोपमा पक्राउ परी धरौटीमा छुटेका तीन जना पुनः पक्राउ